Komishanka Oo Daboolka ka qaaday Inay Dib u eegis ku samaynayaan Natiijaddii Hargeysa | Somaliland.Org
Komishanka Oo Daboolka ka qaaday Inay Dib u eegis ku samaynayaan Natiijaddii Hargeysa
December 8, 2012	HARGEYSA (Somaliland.Org)-Komishanka Doorashooyinka Somaliland ayaa shaaca ka qaaday inay hakiyeen natiijadii doorashada deegaanka ee degmadda Hargeysa ee lagu dhawaaqay cawaynimadii khamiistii, si dib loogu eego sanaaduuqdii codbixinta degmadda.
Sidaasi waxa sheegay Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Md. Ciise Yuusuf Maxamed (Xamari), waxaanu dhambaal tacsi ah u diray qoysaskii dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay shaqaaqadii shalay iyo habeen hore ka dhacday xaafadda Axmed dhagax ee magaalladda Hargeysa.
“Komiishanka doorashooyinka qaranka ee xarunta dhexe waxa uu go’aan ku gaadhay maanta in la eego oo laga daba tago, wixii laga qaban karana laga qabto hakadna wuu saaray natiijadda ay ku dhawaaqeen ee degmadda, goobihii laga cabanayeyna dib bakhaarkii loo furo oo la iskula eego,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka oo maanta u waramayay laanta afsoomaaliga ee BBC-da.
“Si tabashadaasi loo dabaalo si aan dhiig dambe u sii daadan ayaanu go’aankan u qaadanay,”ayuu yidhi Md. Ciise Xamari.
Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinku waxa uu intaasi ku daray “Xisbiyadda waanu iska aragnay way ku qanceen waana Hargeysa meesha lagu noqonayaa, umana malaynayo in wax badan iska bedali doonaan sida ay hadda ururadu iyo xisbiyadu wax u kala heleen sida aan xogta ku hayno,”
Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Markaa waxaanu qancinaynaa ururadda iyo axsaabta si tabashada loo wadda daboolo.”
Go’aankan Komishanka ayaa ka dhashay ka dib markii shaacintii natiijadda doorashada Hargeysa ay ka dhasheen cabashooyin badan oo sababay rabshado ay ku dhinteen laba qof, todoba kalena ku dhaawacmeen.
Previous PostGu’ga Carabta iyo Gabbal-Dhaca Israa’iil (Qaybtii 2aad)Next Post“Waxaan idiin cadaynayaa xisbiga KULMIYE ma uu samayn wax ku shubasho ah”	Blog